Njem Budapest, ihe ihu ma mee II | Akụkọ Njem
Njem Budapest, ihe ịhụ ma mee II
Anyị na-aga n'ihu na akụkụ nke abụọ nke ihe niile ahụ anyị nwere ike ịhụ ma mee gaa obodo Budapest. Ọ bụrụ na ị masịrị ebe ndị a niile, dị ka nnukwu Buda Castle na ụlọ nyocha ya, Chain Bridge a ma ama ma ọ bụ ebe ịzụ ahịa dị n'obodo ahụ, anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji were tiketi ga-aga obodo Europe a na-adọrọ mmasị.
Na Budapest anyị nwere ihe ncheta ndị dị mkpa, dị ka nnukwu ụlọ ya ma ọ bụ akwa mmiri a ma ama, ma e nwekwara ebe ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ ma nwee ike ịmasị nke ukwuu ịgbakwunye na ndepụta njem anyị. Obodo jupụtara na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ụka ma ọ bụ ogige ntụrụndụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ezumike gị.
1 Ndị dike square
2 Basilica nke Saint Stephen
3 Lee Ngosi ihe mgbe ochie na Budapest
4 Gaa Leta Central Market
5 Gaa Aquincum na njem gara aga
6 Zuo ike na ogige obodo
7 Njem ụgbọ mmiri na Danube
Ndị dike square
Site na Ndị dike square Gafere, ebe ọ dị na etiti Andrássy Okporo ụzọ, ebe ahụ maka ịzụ ahịa nke anyị kwurula banyere ya. Nke a bụ nnukwu square, dị mma maka ịgagharị, ebe ọ bụ na-esote City Park. Na square anyị nwere ike ịhụ ihe akpụrụ akpụ nke ndị guzobere Hungary.
Basilica nke Saint Stephen
Mgbe anyị gara Basilica nke Stivin, anyị ga-amata na ọ bụghị n’ụdị basilica n’ezie, agbanyeghị na akpọrọ ya nke ahụ, na anyị nọ n’ihu ụlọ ụka kacha ibu na Hungary. Anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ mgbịrịgba kachasị na Hungary yana mara Santa Diestra, nke bụ aka ozu nke Saint Stephen. Iji hụ ya, anyị ga-akwụ ntakịrị, yabụ anyị kpebiri ma ọ masịrị anyị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị gaa n'obodo ahụ n'oge ekeresimesi, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ahịa ekeresimesi dị n'ime basilica ebe anyị nwere ike ịzụ nnukwu ahịa. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ụlọ nke bara ezigbo uru.
Lee Ngosi ihe mgbe ochie na Budapest
N’obodo dị ka Budapest, enwere ọtụtụ ebe ndebe ihe mgbe ochie nke nwere ike ịmasị ndị njem nleta. Na Lọ ihe nkiri nke Ọma Arts Ọ bụ otu n'ime ndị kachasị eleta, ọ bụkwa ụlọ neoclassical dị n'akụkụ Plaza de los Héroes. N'ime anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ site n'aka ndị na-ese ihe dịka Picasso, El Greco ma ọ bụ Rafael, yana ụfọdụ ihe sitere n'oge Rome ma ọ bụ nke Egypt. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme nke Oké Mgbukpọ Nazi, ị nwere ike ịga na Ebe Ncheta Oké Mgbukpọ ahụ, ebe a na-edebe ihe ngosi nka ebe ị nwere ike ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu Hungary. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmatakwu banyere akụkọ banyere Hungary, anyị nwere ike ịga na National Museum nke Hungary, yana ihe niile anyị kwesịrị ịma site na mmalite ruo 90s.
E nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ n'obodo ahụ, agbanyeghị na a gaghị eleta ha dịka ndị ahụ ekwuru, mana ihe niile ga-adabere na mmasị na mmasị anyị. Enwere Museum of Applied Arts nke na-adọta uche maka ụlọ ya mara mma, nolọ Ngosi Ihe Ọmụma, ebe ị nwere ike ịmụ banyere ụdị na ndụ ndị Hungaria, Hungary National Gallery na Buda Castle na ọrụ nka na Hungary na Budapest Museum Museum.
Gaa Leta Central Market
El Central ahịa malitere site na narị afọ nke XNUMX ọ bụkwa ya bụ ahịa kachasị ekpuchi ekpuchi na obodo ahụ dum. Ndị na-achọ ịmata ụdị nri ụrị nri ebe ahụ agaghị efunahụ ya. Na Sọnde ọ na-emechi, mana ụbọchị ndị fọdụrụ, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịgagharị iji hụ ihe niile nwere ike ịzụta. Na mgbakwunye, n'elu ụlọ e nwere ụlọ nri na ọnụahịa dị mma nke ukwuu, ebe ọ bụ na site n'ọtụtụ nri, agụụ nwere ike ịpụta.
Gaa Aquincum na njem gara aga
Na Hungary enwekwara ọnụnọ ndị Rome, mana a chọpụtaghị ihe ndị a ruo narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ ihe na-akpali ogige ihe ochie maka ndị na-anụ ụtọ ọdịnala Rom, ebe ọ bụ obodo ochie na mpaghara Pannonia. Enwere ike ịhụ ihe owuwu n'ọnọdụ dị mma, yana ihe ndị na-adọrọ mmasị dịka nsị nsị ochie, ụlọ ịsa ahụ nke ewughachiri ya na mosaics ama ama ma ọ bụ ọbụlagodi usoro kpo oku, nke na-enye anyị echiche banyere etu obodo ndị a siri dị ọtụtụ ọtụtụ narị afọ gara aga.
Zuo ike na ogige obodo
N'obodo Budapest, anyị na-ahụ nnukwu ogige abụọ anyị zuru ike. A maara otu n'ime ha dị ka Ogige Obodo ma ọ bụ Ogige Városliget. Ọ bụ nnukwu ogige a na-ejibu ịchụ nta. N'oge a ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ n'ime, dịka zoo, obere ogige ntụrụndụ, ọmarịcha ụlọ Vajdahunyad ma ọ bụ Széchenyi Spa, nke anyị gwaworo gị maka ya. Ọ bụ n'ezie nnukwu ogige ebe ị nwere ike izu ike ma nwee ọmarịcha ebe ntụrụndụ.
Njem ụgbọ mmiri na Danube
Anyị enweghị ike ịkwụsị ịkwado ọbịbịa dị mma na Budapest ụgbọ mmiri na Danube. Ọ bụ ụzọ ọzọ nke ịhụ obodo ahụ, ebe ọ na-agafere ebe ndị nnọchi anya dịka nzuko omeiwu ma ọ bụ Chain Bridge. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ide akwụkwọ, jiri ụgbọ mmiri panoramic mee ezigbo foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Budapest » Njem Budapest, ihe ịhụ ma mee II
Ryanair na-ebupụta amụma iwu akpa ya na-ese okwu
Sapporo, nke tere aka n’ebe ugwu Japan